उत्तम एन्ड्रोइड फोनहरू: परीक्षण, सुरुवात, अफवाहहरू ... | Androidsis (पृष्ठ) 20)
शाओमी मी ए2को मूल्य फिल्टर गरियो
यसको प्रस्तुतीकरण अघि Xiaomi Mi A2 को अन्तिम मूल्यमा फिल्टर गरियो। एन्ड्रोइड वन फोनमा पर्ने मूल्यहरूको बारेमा थप खोजी गर्नुहोस्।
किरीन 710 १००: हुआवेईको नयाँ मध्य-दायरा प्रोसेसर
किरीन 710१०: हुआवे मध्य-दायरा प्रोसेसरहरू नविकरण गरियो। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मिड-रेंज प्रोसेसरको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सोनी Xperia XZ3 यसको प्रस्तुतीकरण भन्दा पहिले चुहाउँछ
सोनी Xperia XZ3 यसको प्रस्तुतीकरण भन्दा एक महिना अघि जापानी ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन आईएफए २०१ arrive मा आइपुग्नेछ।
Huawei Nova 3: हुआवेईको नयाँ प्रीमियम मध्य-दायरा
Huawei Nova 3: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस्, एक मिड-रेन्ज-प्रीमियम-
Vivo सँग दुई नयाँ मध्य-दायरा टर्मिनलहरू तैयार छ जस्तो देखिन्छ। यी Vivo V1732BA र V1732BT हुन्, कम्पनीका नयाँ फोनहरू जसमा दुई Vivo उपकरणहरू छन्, भर्खर TENAA वेबसाइटमा फिल्टर गरिएको छ, चिनियाँ सर्टिफायर, जसको माध्यमबाट चीनमा बिक्री हुने फोनहरू पास हुन्छन्।
सोनीले पुष्टि गर्दछ कि उनीहरूले IFA 2018 मा एक नयाँ फोन प्रस्तुत गर्दछन्
सोनीले आईएफए २०१ 2018 मा नयाँ फोन अनावरण गर्नेछ। कम्पनीको पुष्टिकरण र फोनहरू उनीहरूले परिचय गराउन सक्ने बारेमा बढि जान्नुहोस्।
सियाओमी मी अधिकतम specific विशिष्टताहरु पत्ता लाग्यो
शाओमी मी म्याक्स of का आधिकारिक विवरणहरू अनावरण गर्‍यो। हामी चिनियाँ ब्रान्डको फोनबाट के आशा गर्न सक्दछौं भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी टैब S4 फाइनल चश्मा चुहावट भयो
हालसालैका वर्षहरूमा हामीले हेरेका थियौं कि ट्याब्लेटमा सट्टेबाजी गर्ने उत्पादकहरूको स conside्ख्या कसरी घटाइएको छ, यसको आफ्नै सहित जब त्यहाँ ग्यालेक्सी ट्याब एस present प्रस्तुत गर्न केहि महिना, वा दिनहरू छन्, सबै विनिर्देशहरू पहिले नै चुहावट भयो। नयाँ सामसु tablet ट्याब्लेटको
Huawei Nova 3i समय भन्दा पहिले Aliexpress मा देखा पर्छ
Huawei Nova 3i पूर्ण रूपमा Aliexpress मा लीक भयो। चिनियाँ निर्माताबाट नयाँ मध्य-दायरा फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट of का प्रथम चित्रहरू फिल्टर गरिएका छन्
ग्यालक्सी नोट9को लागि आधिकारिक रूपमा प्रकाश हेर्न प्रत्येक पटक कम छ र हामी अन्ततः हामीसँग भएका सबै अफवाहहरूको पुष्टि गर्न / / वा अस्वीकार गर्न सक्छौं जब ग्यालक्सी नोट Note को आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको लागि २० दिन भन्दा कम छ, पहिलो छविहरू टर्मिनलको पहिले नै चुहावट भयो।
ग्यालक्सी S8 र S8 + को लागि जुलाई सुरक्षा अपडेट अब उपलब्ध छ
प्रत्येक महिनाको रूपमा, कोरियाली कम्पनीले सेमसंग ग्यालक्सी एस 2018 र एस + + को लागि जुलाई २०१ of को जुलाईको सुरक्षा अपडेट अपडेट गर्नका लागि कम्पनीको सबैभन्दा प्रतिनिधि स्मार्टफोनहरू अपडेट गर्न आफ्नो सर्भर सुरू गर्यो।
Meizu 16 को एक कथित गति परीक्षण प्रकाशमा आउँदछ
Meizu १'s को बेंचमार्क स्कोर फोनको आधिकारिक सुरुवात अर्को महिना अघि अनलाइन लीक भयो। लीक भएको छवि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 16। चिपको साथ मेजु १ 16 को मानीएको गति परीक्षण नेटमा लीक भएको छ। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
स्यामसंग ग्यालेक्सी S10 को लागी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट रिडर
यो पुष्टि भयो कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट रिडर प्रयोग गर्दछ, हामी तपाईंलाई सबै विवरणहरू बताउनेछौं।
शाओमी मी मिक्स of को पहिलो आधिकारिक छविहरू यहाँ छन्
शाओमी मी म्याक्स of को पहिलो आधिकारिक छविहरू अनावरण गर्‍यो। चिनियाँ ब्रान्डको फोनको पहिलो छविहरू यहाँ छन्
शियाओमीले एमआई A2 को प्रस्तुतीकरणको पुष्टि गर्दछ
नयाँ प्रोमोशनल पोस्टरले पुष्टि गर्दछ कि शाओमी मी ए2चाँडै प्रस्तुत हुनेछ र एक्लै नआउन सक्छ
अल्काटेल V वी डुअल क्यामेरा र निशानको साथ डेब्यू गर्दछ
हामी तपाईलाई अल्काटेल V V का सबै विवरणहरू बताउँदछौं, नयाँ अलकाटेल फ्ल्यागशिप उपकरण जुन उत्कृष्ट सुविधाहरूको साथ आउँदछ
Huawei मेट 10 र P20 अगस्ट मा GPU टर्बो प्राप्त हुनेछ
GPU टर्बो Huawei मेट 10 र P20 मा अगस्तमा आउँदैछ। चिनियाँ ब्रान्डको फोनमा यस अपडेटको आगमनको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
Huawei EMUI 8.1 Mate 10 र Mate 10 Pro को लागि जारी गर्दछ
धेरै हप्ता अघि, Huawei घोषणा गरेको कि मेट १० र मेट १० प्रो यस महिनाको मध्यमा Android .10.१ Oreo अन्तर्गत EMUI .10.१ प्राप्त गर्नेछ। अब, पहिले नै घोषणा गरिएको हुवावेले EMUI 8.1 जारी गरेको छ, यसको नवीनतम अनुकूलन तह, Android १०.१ Oreo अन्तर्गत मेट १० र मेट १० प्रोको लागि छ।
सामसु'sको नयाँ प्रविष्टि स्तरमा आईरिस स्क्यानर हुनेछ
सामसुले यसको नयाँ लो-एन्डमा आईरिस पाठक परिचय गराउनेछ। अधिक फोनमा आईरिस रिडर प्रयोग गर्ने कम्पनीको योजनाको बारे फेला पार्नुहोस्।
MIUI 10 21 नयाँ शाओमी फोनमा पुग्छ
२१ शियाओमी फोनहरू पहिले नै MIUI १० मा अपडेट हुँदैछ। कुन मोडेलले अनुकूलन तहको अद्यावधिक प्राप्त गर्न गइरहेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
नोकिया .5.1.१ प्लस जुलाई १ on मा प्रस्तुत गरिनेछ
नोकिया .5.1.१ प्लस आधिकारिक रूपमा जुलाई १ on मा आउँनेछ। ब्रान्डको मध्य-दायराको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु'sको मोबाइल डिभिजनका सीईओले सार्वजनिक रूपमा ग्यालक्सी नोट uses प्रयोग गर्दछ
अगस्त9मा, कोरियाली कम्पनीले एक कार्यक्रम निर्धारित गर्‍यो जुन उनले आधिकारिक रूपमा ग्यालक्सी नोट present प्रस्तुत गर्नेछ (धेरै नाइनहरू सँगै, म यहाँ देख्छु) सामसु mobile मोबाइल डिभिजनका लागि अधिकतम उत्तरदायी, डीजे कोह, पहिले नै नयाँ ग्यालक्सी नोटको साथ देखिएको छ Public सार्वजनिकमा, कुनै पनि समयमा यसलाई लुकाउन चिन्ता नगरिकन
शियोमीले Mi A1 को एन्ड्रोइड Oreo मा अपडेट पुनः जारी गर्‍यो
करीव १ days दिन अगाडि श्याओमीका केटाकेटीलाई सर्भरबाट पछि हटाउन बाध्य पारिएको थियो उनीहरूले उनीहरूको एशियन फर्मका लागि जारी गरेको पछिल्लो अपडेट, एमआई ए १ टर्मिनलको एन्ड्रोइड .15.१ मा पुनः अपडेट गरिएको छ, एउटा अपडेट दुई हप्ता पहिले यो प्रस्तुत समस्या को कारण फिर्ता लिनुहोस्।
सम्झौता: ZTE विभिन्न शर्तहरुमा संयुक्त राज्य मा संचालित हुनेछ
केही दिन अघि, हामीले तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाणिज्य विभागको साथ ZTE को जटिलताको अन्त्यको बारेमा सूचित गर्‍यौं। ठिक छ, यो बढि हो, ZTE ले संयुक्त राज्यमा व्यापार जारी राख्न सक्छ, तर केहि स्थापित करारहरु अनुसरण नगरीकन। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
Vivo NEX S सबैभन्दा प्रसिद्ध धीरज परीक्षण पार गर्दछ
Vivo NEX S ले जेरीRigE Everything धीरज परीक्षण पार गर्दछ। धैर्यताको परीक्षणको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन Vivo को उच्च-अन्तमा अधीनमा छ।
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करण जुलाई २ on लाई सुरू गर्न सकिन्छ
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करण जुलाई २ on मा सुरूवात हुनेछ। अर्को हप्ता बजारमा उच्च-अन्तको सम्भावित आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei Nova3र Nova 3i जुलाई २ on मा आईपुग्नेछ
Huawei Nova3र Nova 3i जुलाई २ on मा आधिकारिक हुनेछ। बजारमा यी मोडेलहरूको आगमनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी ए २ लाइटको पूर्ण विवरणहरू फिल्टर गरियो
शाओमी मी A2 लाइट: निर्दिष्टीकरण र मूल्य लीक भयो। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन पहिले नै पूर्णरूपमा चुहावट भयो।
नोकिया .5.1.१ प्लस एक नयाँ प्रस्तुतीकरण मिति प्राप्त गर्दछ
नोकिया .5.1.१ प्लस जुलाई १ on मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नयाँ नोकिया मध्य-दायरा प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी अधिकतम of का केहि विशिष्टताहरू फिल्टर गरियो
श्याओमी मी अधिकतम:: पहिलो स्पेसिफिकेसन चुहावट भयो। सियोमी phablet बाट आउने पहिलो विशिष्टताहरुका बारे अधिक जान्नुहोस्,
HTC U12 + ले मिल्दो स्वत: जूम र नयाँ सुविधाहरू थप्दै एक अद्यावधिक प्राप्त गर्दछ
यस बर्षको लागि एचटीसीको फ्ल्यागशिप टर्मिनल, HTC U12 + ले नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न सुरू गर्यो जसले भिडियो मोडमा स्वचालित जूम सुधार गर्दछ।
ओप्पो युरोपमा new० नयाँ फोनहरू सुरुवात गर्नेछ
विपक्षले युरोपमा कुल new० नयाँ फोनहरू सुरूवात गर्दछ। चिनियाँ निर्माताले युरोपमा नयाँ मोडलहरू सुरू गर्ने योजनाहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी 8, एमआई ए २, एमआई मैक्स2र पोकोफोन एफ १ युरोपमा दर्ता गरियो
शाओमीले युरोपमा सुरूवात गर्नका लागि धेरै फोन प्रमाणित गर्यो। ती मोडेलहरू सुरूवात गर्न ब्रान्डको योजनाहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
हनर १० ले विश्वव्यापी million मिलियन युनिटहरू बेचेको छ
ह्यानर १० ले already लाख भन्दा बढी युनिटहरू बिक्री गरिसकेको छ। यस सफ्टवेयरको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन फोन निर्माता निर्माताबाट फोनले विश्वभर गर्दै छ।
वनप्लसले यसको ग्यालरी अनुप्रयोग अपडेट गर्दछ जसले हामीलाई भिडियोहरू ट्रिम गर्न र पृष्ठभूमि संगीत थप्न अनुमति दिँदछ
वनप्लसले यसको टर्मिनलका लागि नयाँ प्रकार्यहरू थप्न ग्यालरी अनुप्रयोगको नयाँ अपडेट सुरू गर्न सुरु गरेको छ।
सामसुले ग्यालक्सी वाच आईएफए २०१ present मा प्रस्तुत गर्न सक्दछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच आईएफए २०१ 2018 मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कोरियाली फर्मको घडीको प्रस्तुतिको मितिको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
सोनी Xperia XZ2 प्रीमियम अगस्त मा स्पेन मा शुरू गरिनेछ
सोनी Xperia XZ2 प्रीमियम स्पेन मा अगस्ट को अन्त मा शुरू गरिनेछ। सोनीको उच्च अन्त को स्पेनिश बजार को आगमन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट of को पहिलो प्रचार छवि फिल्टर गरिएको छ
ग्यालक्सी नोट promotion पदोन्नतिको अंश के हुनेछ भनेर पहिलो छवि लीक भएको छ र हामीलाई यस टर्मिनलको नयाँ डिजाइन हेर्न दिन्छ।
नयाँ शाओमी मी ए २ लाइट फिल्टर गरियो
शाओमी एमआई ए २ लाइट: एन्ड्रोइड वनको साथ नयाँ शाओमी फोन। यस नयाँ फोनलाई चिनियाँ ब्रान्डबाट पत्ता लगाउनुहोस् जुन एम ए २ सँग हुनेछ।
ग्यालक्सी नोट अगस्ट २ on मा बिक्री मा हुनेछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट August अगस्त २ sale मा बिक्रीमा हुनेछ। कोरियाली ब्रान्डको फोनको प्रक्षेपण मिति बारे थप जानकारी पाउनुहोस्।
गैलेक्सी J6 को लागि जुलाई सुरक्षा अपडेट अब स्पेनमा उपलब्ध छ
ग्यालक्सी जे for को लागि पहिलो सुरक्षा अपडेट अब स्पेन र इटालीमा डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ, यसलाई प्राप्त गर्ने पहिलो देशहरू हुन्।
सोनी Xperia XA2 Plus: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
सोनी Xperia XA2 प्लस: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। जापानी ब्रान्डबाट नयाँ मध्य-दायरा फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी म्याक्स July जुलाई १ on मा प्रस्तुत गरिने छ
शाओमी मी म्याक्स July जुलाई १ on मा प्रस्तुत गरिने छ। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
LG Q7: LG को नयाँ मध्य दायरा स्पेन आइपुग्छ
LG Q7 आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ। फर्मको नयाँ मध्य-दायरा आधिकारिक रूपमा स्पेनको आगमनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्
नोकिया .5.1.१ प्लसको प्रस्तुतीकरण स्थगित गरियो
नोकिया .5.1.१ प्लस प्रस्तुतीकरण रद्द गरियो। यस घटना रद्दको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् यसको मतलब हामीले फोन नम्बर थाहा पाउन पर्खनु पर्नेछ।
सियाओमीले जुलाई १ on मा जारागोजामा स्टोर खुल्नेछ
शाओमीले जुलाई १ on मा जारागोजामा यसको स्टोर खोल्ने घोषणा गर्‍यो। स्पेनमा नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड स्टोरको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी A8 र A8 + (२०१)) ले Android Android.० Oreo प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
ग्यालक्सी A8 र A8 + (2018) Android .8.0.० Oreo मा अपडेट। अपडेटको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन दुई सामसु models मोडेलहरूमा पुग्न थाल्छ।
ग्यालक्सी नोट of को पहिलो आधिकारिक छवि अनावरण गरियो
यसको पहिलो आधिकारिक छविमा ग्यालक्सी नोट of को डिजाइन अनावरण गरियो। सामसु'sको नयाँ उच्च-अन्तको पहिलो तस्विरको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
नोकिया .5.1.१ प्लस लीक भएको छ: नच र डबल क्यामेराको साथ स्क्रीन
यसको प्रस्तुतीकरण अघि नोकिया .5.1.१ प्लसको पूर्ण डिजाइन फिल्टर गर्नुहोस्। नयाँ नोकिया मध्य-दायरा बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
Nubia Z18 यसको प्रमुख चश्मा साथ Geekbench मा देखा पर्दछ
ZTE को सहायक Nubia, यसको अर्को प्रमुख तयार छ जस्तो देखिन्छ। यो नुबिया जेड १ is हो, केही प्राविधिक विवरणहरूको साथ एक उच्च-अन्त जुन कि नुबिया जेड १ Ge ले हालसालै गीकबेन्चमा देखा पर्‍यो, यसले हामीलाई यसको मुख्य विशेषताको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू छोड्दछ। पत्ता लगाउनू!
LG Q6 ले Android .8.0.० Oreo प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
LG Q6 ले Android .8.0.० Oreo मा अपडेट प्राप्त गर्दछ। दक्षिण कोरियाका प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोइड ओरियो अपडेटलाई आश्चर्य द्वारा प्राप्त गर्छन्।
सात हुवावे मोडेलहरूले एन्ड्रोइड .8.0.० ओरियोमा आधारित ईएमयूआई .8.0.० प्राप्त गरिसकेका छन्
हुवावेले भर्खरै सातवटा मोडेलका लागि अपडेट जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो जुन एन्ड्रोइड .8.0.० ओरेओमा आधारित ईएमयूआई .8.0.० मा प्रवेश गर्नेछ। हुवावेले घोषणा गर्‍यो कि यसको models मोडलहरूले एन्ड्रोइड .7.० ओरियोमा आधारित ईएमयूआई receive प्राप्त गर्नेछ। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
सामसु'sको क्यालेन्डर अनुप्रयोगले अब तपाईंलाई नियुक्तिहरूमा स्टिकरहरू थप्न अनुमति दिन्छ
सामसुले ग्यालेक्सी एस on मा उपलब्ध पुरानो टर्मिनलहरूमा प्रकार्य थपेर आफ्नो अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न जारी राख्दछ
सामसु्गले नेदरल्याण्डको व्यापार बजारमा एप्पललाई पछाड्यो
कोरियाली बहुराष्ट्रिय सामसु Samsung मात्र एक बर्षमा पार गर्न सफल भयो, र अझै सम्म, कपर्टिनो-आधारित कम्पनी एप्पल उद्यम बजारमा
Vivo Nex यस महिना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरूवात हुनेछ
Vivo NEX यस महिना चीनको बाहिर प्रक्षेपण गर्ने छ। ती देशहरूका बारे अझ बढि पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ तपाईं फोन किन्न सक्षम हुनुहुनेछ।
Huawei TalkBand B5 जुलाई १ on मा प्रस्तुत गरिनेछ
हुवावेले जुलाई १5मा हुवावे टकब्यान्ड बी introduce लाई प्रस्तुत गर्ने छ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ ब्रेसलेटको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी नयाँ उच्च-एंड फोनमा काम गर्दछ
पोकोफोन: शाओमी भारतको लागि नयाँ ब्रान्ड। यस Xiaomi ब्रान्डको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस् भारतमा फोनहरू सुरूवात गर्न।
शाओमीले शाओमी रेडमी A ए को नयाँ संस्करण सुरू गर्‍यो
शाओमी रेडमी A ए: चीनमा नयाँ संस्करण सुरू भयो। आज चीनमा फोन प्रक्षेपणको नयाँ संस्करणको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
नोकिया 3.1.१ आधिकारिक रूपमा स्पेन आइपुग्छ
नोकिया 3.1.१ आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ। हाम्रो देशमा यस मध्य-दायराको आधिकारिक सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Experको नवीनतम अपडेटले ग्यालक्सी एस of को स्क्रिन घुमाउन प्रयोगकर्तालाई अनुमति दिन्छ
सामसुले सामसु Exper अनुभव अनुकूलन तहमा नयाँ अपडेट जारी गरेको छ जुन तपाईंलाई होम स्क्रिन र मेनू घुमाउन अनुमति दिन्छ
जून २०१ 10 को १० सब भन्दा शक्तिशाली फोन, एन्टु बेन्चमार्कका अनुसार
एन्ड्रोइड संसारमा एक सबैभन्दा लोकप्रिय, लोकप्रिय र भरोसा बेन्चमार्क निस्सन्देह AnTuTu हो। र यो त्यस्तै हो कि गीकबेन्च र अन्यसँग मिलेर, उनलाई थाहा छ जुन जुन सबैभन्दा शक्तिशाली स्मार्टफोनहरू छन् जुन एन्टुटु बेन्चमार्कले खुलासा गरेको सूचिमा धन्यवाद छ। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
हुवावे एक स्मार्टवाच प्याटेन्ट गर्दछ जुन तपाईंलाई हेडफोन भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछ
हुवावे एक स्मार्टवाच प्याटेन्ट गर्दछ जुन तपाईंलाई हेडफोन भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको लागि नयाँ प्याटेन्टको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसुले विश्वको सबैभन्दा ठूलो फोन उत्पादन कारखाना खोल्छ
सामसुले विश्वको सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन उत्पादन कारखानाको उद्घाटन गर्दछ। भारतमा यस सामसु production उत्पादन सुविधाहरूको बारेमा थप जानकारी पाउनुहोस्।
शाओमी मी ए2का विभिन्न संस्करणहरू फिल्टर गरियो
Xiaomi Mi A2 महिनाको अन्त्यमा यसको प्रक्षेपणमा मार्केटमा विभिन्न संस्करण र रंगहरू लीक भैसकेको छ।
शाओमीले भ्यालेन्सिया र ला कोरुआमा नयाँ स्टोरहरू खोल्नेछ
शियोमीले भ्यालेन्सिया र ला कोरुआमा नयाँ स्टोरहरू घोषणा गर्‍यो। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड स्टोरहरूको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् जुन स्पेनमा आइपुग्छ।
नोकिया 8810 XNUMX१० वाट्सएप प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ
नोकिया 8810 XNUMX१० मा व्हाट्सएप हुन सक्छ। ब्रान्डको फोनमा सन्देश अनुप्रयोगको आगमन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
शाओमी मी मिक्स prices मूल्यहरु पत्ता लाग्यो
शाओमी मी मिक्स prices को मूल्यहरु पत्ता लाग्यो। नयाँ शाओमी फोनको संस्करणहरुमा हुने मूल्यहरुको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
OPPO A5 जुलाई १ on मा सुरू हुने छ
विपक्ष A5: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। जुलाई १ 13 मा सुरू भएको चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्,
नोकिया X5 जुलाई ११ मा प्रस्तुत गरिने छ
नोकिया X5 लाई आधिकारिक रूपमा जुलाई ११ मा अनावरण गरिनेछ। ब्रान्डको नयाँ फोनको प्रस्तुतीकरणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ट्रिपल क्यामेराको साथ सामसु Galaxy ग्यालक्सी S10 को नयाँ अफवाहहरु
त्यहाँ ग्यालक्सी S10 को तीन क्यामेरा संस्करण को नयाँ अफवाहहरु छन्, हामी तपाईंलाई यस फोटोग्राफिक रचना को विवरण बताउन
नोकिया X6 जुलाई १ on, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नोकिया .19.१ प्लस को रूप मा प्रक्षेपण हुनेछ
नोकिया X6 जुलाई १ on मा चीन बाहिर नोकिया .19.१ प्लस को रूपमा सुरू गर्दछ। नोकिया फोन लन्चको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
हनर नोट १० एक 10 इन्च स्क्रीनको साथ आउनेछ
ह्यानर नोट १० का प्रथम फ़िल्टर्ड विवरणहरू। यस वर्ष बजारमा चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फ्ल्यागशिपको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
शाओमी मी अधिकतम this यस महिना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
शाओमी मी म्याक्स officially आधिकारिक रूपमा जुलाईमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस महिना बजारमा नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु्गले उन्नत अनुहार पहिचान प्रणाली प्याटेन्ट गर्दछ
सामसु्गले उन्नत अनुहार पहिचान प्रणालीको पेटन्ट गर्यो। कोरियाली कम्पनीबाट नयाँ प्याटेन्टको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
Huawei P9 र P9 लाइट Android Oreo मा अपडेट हुँदैन
हुवावे P9 र P9 लाइटका लागि कुनै Android Oreo हुनेछैन। फोनहरूको लागि अपडेटको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन अन्तमा आउँदैन।
OPPO तीन फरक फोल्डिंग फोन पेटन्ट गर्दछ
OPPO ले तीन फरक फोल्डरहरू प्याटेन्ट गरेको छ। चिनियाँ फोल्डेबल फोन ब्रान्डको नयाँ प्याटेन्टहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
एलजी फोल्डिंग फोनमा काम गर्दैछ
एलजी पहिले नै आफ्नो पहिलो फोल्डिंग फोन प्याटेन्टेड छ। कोरियाली फर्मले पहिले नै आफ्नो पहिलो फोल्डिंग फोनमा काम गरिरहेको छ, जुन उनीहरूले आधिकारिक रूपमा पेटन्ट गरेका छन्।
ग्यालक्सी एक्स र गैलेक्सी S10 आफ्नो प्रस्तुति मिति परिवर्तन
ग्यालक्सी एक्स र ग्यालक्सी एस १० को प्रस्तुतीकरण मिति परिवर्तन गरिएको छ। सामसु models मोडेलहरूको लागि नयाँ रिलिज मितिहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट of को पहिलो केस यस्तो देखिन्छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को पहिलो केसहरु पहिले नै चुहावट गरिसकेका छन्, ती केसहरूले अर्को सामसु। Phablet को डिजाइन पुष्टि गर्छ
शाओमी मी मिक्स मा स्लाइडिंग क्यामेरा हुनेछ
शाओमी मी मिक्स मा स्लाइडिंग क्यामेरा हुनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको फोनमा यो प्रणाली प्रयोग गर्न को योजनाहरु को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
Oukitel K8: विशिष्टता र सुविधाहरू
एसियाली निर्माता Oukitel को नयाँ प्रमुख, K8 जुलाई को अन्त मा बजार मा हिट हुनेछ। जबकि हामी तपाईंलाई अन्तिम निर्दिष्टताहरू के हो भनेर देखाउँदछौं
शाओमी संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी एक स्मार्टफोन मा काम गर्दछ
शियाओमीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि एक्स्पोजेसी फोन सुरूवात गर्नेछ। अमेरिकी बजारमा चिनियाँ ब्रान्डको प्रवेशको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी J3 2017, J5 2017 र J7 2017 को Android Oreo मा अपडेट ढिला भयो
ग्यालक्सी जे,, ग्यालक्सी जे and र ग्यालक्सी जे3२०१ ter टर्मिनलहरूको लागि अपेक्षित अपडेट सेप्टेम्बरसम्म केहि महिनाको लागि ढिलाइ हुनेछ
ग्यालक्सी नोट विभिन्न पाँच रंगमा आउँनेछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट five पाँच रंगमा उपलब्ध हुनेछ। उनीहरूको बजार प्रक्षेपणको लागि छनौट गरिएका र colors्गहरू बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
वनप्लस and र T टी पहिले नै प्रोजेक्ट ट्रेबलसँग उपयुक्त छन्
वनप्लस and र T टीसँग पहिले नै प्रोजेक्ट ट्रेबल समर्थन छ। नयाँ बेटाको बारेमा थप खोज्नुहोस् जुन ब्राण्डको दुई फोनहरूमा समर्थन थप गर्दछ।
सामसु'sको फोल्डेबल फोनमा फोल्डयोग्य ब्याट्री हुनेछ
सामसु'sको फोल्डेबल फोनले फोल्डयोग्य ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। सामसु Galaxy्या ग्यालेक्सी एक्सले प्रयोग गर्ने ब्याट्रीको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
Exynos9चुहावटको साथ ग्यालक्सी नोट bench बेंचमार्क
एउटा नयाँ बेन्चमार्क गीकबेन्चमा भर्खरै फिल्टर गरिएको छ जहाँ हामी देख्न सक्छौं कि कसरी ग्यालेक्सी नोट of को प्रदर्शन समान प्रोसेसरको साथ ग्यालक्सी एस + + सँग मिल्दोजुल्दो छ।
सामसु'sको पहिलो एन्ड्रोइड गो सामसु Exper अनुभवको साथ आउँनेछ
एन्ड्रोइड गो संग भएको सैमसंग फोनमा सामसु Samsung अनुभव हुनेछ। यस फोनको बारेमा अधिक कोरियाली ब्रान्डबाट फेला पार्नुहोस् जुन चाँडै आउँदैछ।
Meitu MP1710 TENAA मार्फत जान्छ र यी यसको मुख्य सुविधाहरू हुन्
२०० 2008 मा स्थापित चिनियाँ कम्पनी, मीटूको टेनाए, नियामक र मेटा एमपी १1710१० को टेना द्वारा हालसालै पारित भएकोले नयाँ टर्मिनल तयार भएको देखिन्छ र यसको विशेषता र मुख्य प्राविधिक विवरणहरू प्रकट गर्दछ। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं
Meizu सीईओ Meizu 16 जुलाई को अन्त मा वा अगस्टको शुरुमा आउँछ भन्छन्
हाल, मेइजु १ 16 कम्पनीको सबैभन्दा प्रत्याशित उपकरणहरू हो, अन्तहीन अफवाह र अनुमानहरू उत्पन्न गर्दै जुन मेजुको सीईओ ज्याक वोंगले औंल्याए कि मेजु १ 16 यस अगस्टको सुरूमा वा यस महिनाको अन्त्यमा आइपुग्नेछ। । हामी तपाईंलाई विस्तार!
Honor 10 GT, GB जीबीको र्याम र किरिन 8 970० प्रोसेसरको मोबाइल। हामी यसलाई तपाइँसँग प्रस्तुत गर्दछौं!
हामीसँग नयाँ उच्च-अन्त छ! केही घण्टा अघि, Huawei Honor 10 GT लाई यसको पहिलो स्मार्टफोनको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ जसमा Honor 8 GT को रूपमा 10GB रम मेमोरी छ! यो उपकरण रमको GB जीबीको साथ फर्मको पहिलो मोबाइलको रूपमा चित्रित छ। थप रूपमा, यो GPU टर्बो छ।
Vivo NEX मा एउटा बगले चेतावनी बिना retractable क्यामेरा सक्रिय गर्न को लागी गर्छ
भर्खरै, Vivo ले Vivo NEX सुरू गर्‍यो, एक उच्च-अन्त रिट्र्याकेबल क्यामेराको साथ जसले फर्मको प्रख्यात खाच डिजाइन लागू गर्ने आवश्यकतालाई समाप्त गर्‍यो। Vivo NEX मा एउटा बगले कुनै कार्य नगरीकन फिर्ता लिन योग्य क्यामेरा देखा पर्दछ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
Vivo Z1i: चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
Vivo Z1i: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चाईनीज ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन चाँडै सुरू हुन्छ।
Huawei Nova3जुलाई १ on मा प्रस्तुत गरिने छ
पुष्टि भयो: हुवावे नोवा July जुलाई १3मा प्रस्तुत गरिने छ। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब एस The को पहिलो रेन्डर फिल्टर गरिएको छ
ग्यालक्सी ट्याब एसको चौथो पीढी के हुनेछ भन्नेको पहिलो छवि, भर्खर फिल्टर गरिएको छ र हामीलाई फ्रेमहरू देखाउँदछ जुन यसको पूर्ववर्तीहरू भन्दा पातलो छ।
Huawei Nova3सुविधाहरू TENAA द्वारा प्रकट गरिएको थियो
Huawei पहिले नै नोभा २ का उत्तराधिकारी छ, यसको गत वर्षको मध्य दायरा, र यो हो, हुवाई नोवा 2.। यो उपकरण TENAA मा लीक भएको थियो Huawei Nova3TENAA मार्फत गएको थियो र हामीलाई यो पहिले नै थाहा छ डिजाइन र मुख्य सुविधाहरू। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
HTC ले यसको कामदारहरूको २२% छुट दिन्छ
ताइवान कम्पनी एचटीसीले घोषणा गरेको छ कि यसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो कार्यबलको २२% छुट दिने सम्झौता गरेको छ।
Huawei Y5 (२०१)) आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ
हुवावे वाई ((२०१ 5) अब स्पेनमा उपलब्ध छ। हाम्रो देशमा नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको सुरुवातका बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
Xiaomi Mi A8.1 को Android .1.१ Oreo मा अपडेट फिर्ता लिनुहोस्। त्रुटिहरूको बारे बढि फेला पार्नुहोस् जुन उत्पन्न भएको छ र यसको फिर्ता लिने कारण हो।
लाभा रातोमा वनप्लस already प्रस्तुत गरिसकिएको छ। लाभा रातोमा चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको नयाँ संस्करणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को एस-पेनमा ब्लुटुथ फिचर हुनेछ। परिवर्तनहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन उच्च-अन्त स्टाइलसले ल्याउँछ।
शाओमी मी X एक्स हत्सुने मिकु विशेष संस्करणको भण्डार १.6 मिलियन हो
शाओमी मी X एक्स हॅट्सुन मिकु विशेष संस्करणको १.6 मिलियन आरक्षण छ। फोनको यो विशेष संस्करणको सफलताको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हुवावे P10 लाइट र मेट १० लाइट Android .10.० Oreo मा अपडेट
एन्ड्रोइड O.० ओरियो Huawei P8.0 लाइट र Mate 10 लाइटमा आउँछ। अपडेटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन निर्माताको फोनहरू पुग्न सुरू भइरहेको छ।
जुलाई २ मा, एक नयाँ वनप्लस red रातोमा घोषित गर्न सकिन्छ
वनप्लसले वनप्लस दायरा भित्र नयाँ रंग घोषणा गर्न सक्दछ: रातो।
Xiami Mi A1 को Android Ore 8.1 को अद्यावधिक अब उपलब्ध छ तर समस्याहरूको साथ
सबै अद्यावधिकहरू जुन निर्माणकर्ताहरूले उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूको लागि सुरू गर्छन्, पहिले बिटा चरण मार्फत जान्छ ...
MIUI १० ग्लोबल बीटा: Xiaomi फोनहरूको सूची मिल्नेछ र उनीहरूको अद्यावधिक मितिहरू
महिनाको सुरूमा, हामीले तपाईंलाई आधिकारिक सूचीको बारेमा सूचित गर्‍यौं कि सियोमीले हामीलाई प्रदान गरेको मोबाइल उपकरणहरू देखा पर्‍यो जुन सियाओमीले मोबाइल उपकरणहरूको नयाँ सूची प्रकट गरेको छ जुन MIUI १० ग्लोबल बीटासँग उपयुक्त हुनेछ। तिनीहरूको सम्बन्धित अद्यावधिक मितिहरू जान्नुहोस्!
सियामीले जुलाई in मा स्पेनमा दुई नयाँ स्टोरहरू खोल्नेछ
सियामीले जुलाई in मा स्पेनमा दुई नयाँ स्टोरहरू खोल्नेछ। एक हप्तामा चिनियाँ ब्रान्ड स्पेनमा खुल्ने स्टोरहरू बारे अधिक जानकारी लिनुहोस्।
हुवावेले GPU टर्बो टेक्नोलोजी र सहायक उपकरणहरूको सूचीको प्रयोग घोषणा गर्दछ
Huawei यस महिनाको शुरूमा GPU टर्बो प्रविधिको घोषणा गरेको थियो। यो टेक्नोलोजी, जुन सफ्टवेयर र हार्डवेयरको अप्टिमाइजेसनमा आधारित छ, Huawei ले GPU टर्बो टेक्नोलोजीको परिमार्जनलाई अपडेट मार्फत पुष्टि गर्दछ जसमा Huawei र Honor फोनहरू समावेश छन्।
Nubia Z18S, डुअल स्क्रिनको साथ अर्को ZTE फोन
नुबिया Z18S, फेरि चुहावटमा देखा पर्‍यो, अगाडि क्यामेरा बिना डबल स्क्रिन, हामी तपाईंलाई थप विवरणहरू बताउँदछौं
हुवावेले हरेक दुई महिनामा आफ्नो फोन अपडेट गर्दछ
Huawei हरेक दुई महिनामा आफ्नो फोन अपडेट गर्ने वाचा गर्दछ। ब्रान्डको उपकरणहरू अद्यावधिक गर्ने वाचाको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
हुवावेले एन्ड्रोइड ओरियोमा सात फोन अपडेट गर्नेछ
सात Huawei र Honor फोनहरू Android Oreo मा अपडेट हुनेछन्। नयाँ मोडेलहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन यो अपडेट प्राप्त गर्दछन्।
हुवावेले जून २०१G मा पहिलो G जी फोन सुरुवात गर्नेछ
5G को साथ पहिलो Huawei फोन जुन २०१ 2019 मा आउनेछ। Huawei5जी लाई पुश गर्न चाहेको यस फोनको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
वनप्लसले यसका फोनका लागि तीन बर्षको लागि अपडेट प्रस्ताव गर्ने वाचा गर्दछ
वनप्लसले यसको फोनमा तीन बर्षको लागि अपडेटहरू दिनेछ। ब्रान्डबाट विज्ञापनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन अद्यावधिकहरू दिने वाचा गर्दछ।
शाओमीले भारतमा रेडमी नोट and र रेडमी नोट Pro प्रोको million मिलियन युनिटहरू मात्र months महिनामा बेच्यो
शिओमी, शीर्ष पाँच मोबाइल फोन निर्माताहरू मध्ये एक, रेडमी नोट of र रेडमी नोट Pro प्रोक्सीओमी, चिनियाँ कम्पनीको करीव million० लाख युनिटहरू बेच्न सफल भएको छ र रिपोर्ट गरिएको छ कि यसले शाओमी रेडमी नोट of र five लाख युनिटहरू बेचेको छ। शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो भारतमा।
अक्टूबरमा सोनी मध्य पूर्व, अफ्रिका र टर्कीमा अपरेशनहरू बन्द गर्ने छ
सोनी स्थापना कालदेखि नै सबैभन्दा मान्य र लामो समयदेखि स्मार्टफोन निर्माण कम्पनीको रूपमा परिचित छ। यो एक सोनी प्रतिनिधित्व गर्दछ टर्की, अफ्रिका र मध्य पूर्व मा अक्टोबर को अर्को महिना मा संचालन बन्द हुनेछ। इवान ब्लासले यो औंल्याए। हामी तपाईंलाई विस्तार!
ISOCELL Plus: कम प्रकाश अवस्थाहरूमा फोटोहरू सुधार गर्न सामसु'sको नयाँ प्रविधि
सामसुले भर्खर ISOSELL Plus नामको नयाँ प्रविधि ल्याएको छ। कम्पनी सामसुद्वारा प्रस्तुत गरिएको सीएमओएस सेन्सरमा लागू गरिएको आईओएसओएलएलको सुधार यो भर्खर आईसोकेल प्लस नामक नयाँ प्रविधि ल्याएको छ। केहि बर्ष पहिले कम्पनी द्वारा प्रस्तुत गरिएको यो ISOCELL एन्हान्समेन्ट हो।
शाओमी मी अधिकतम the को बिक्री मूल्य प्रकट भयो
शाओमी मी म्याक्स को १,3 1.699 yuan युआनको रिटेल मूल्य हुनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनमा पर्ने मूल्यको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
उत्तम नोकिया फोन आईएफए २०१ arrive मा आइपुग्नेछ
सबै भन्दा राम्रो नोकिया फोन आईएफए २०१ will मा प्रस्तुत गरिनेछ। यस ब्राण्डको नयाँ मोडेलको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन वर्षको दोस्रो आधामा आउँदछ।
शाओमी मी ए2ताइवान एनसीसी द्वारा प्रमाणित छ
Xiaomi पहिले नै Xiaomi Mi A2 तयार छ, फर्मको अर्को मध्य-दायरा। यस उपकरण, सिंगापुर मा प्रमाणित पछि, Xiaomi Mi A2 प्राप्त NC द्वारा ताइवान मा प्रमाणित छ। थप रूपमा, फर्मको फोरममा दिएको प्रकाशन अनुसार, यो जुलाई २ on मा प्रस्तुत गरिनेछ।
ग्यालक्सी S9 र S9 + को पछिल्लो अपडेटले संयुक्त राज्यमा एफएम रेडियो पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ
ग्यालक्सी एस of को पछिल्लो सुरक्षा अपडेटले चिपलाई सक्रिय गर्दछ जुन यी टर्मिनलहरूको एफएम रेडियोमा पहुँच प्रदान गर्दछ।
सीईओ जैक वia्गका अनुसार, Meizu X8 Xiaomi Mi 8 SE भन्दा राम्रो हुनेछ
मेजुको सीईओ ज्याक वोंग कम्पनीको अर्को मिड-रेंज उपकरण हुने मेइजु एक्स how कती शक्तिशाली हुनेछ भन्नेमा धेरै विश्वस्त महसुस गर्छन्। Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi को पहिलो स्नैपड्रैगन 8 उपकरण।
पुष्टि भयो: ग्यालक्सी नोट August अगस्त on मा प्रस्तुत गरिएको छ
यो आधिकारिक छ: ग्यालक्सी नोट August अगस्त on मा प्रस्तुत गरिएको छ। अफवाहहरूको हप्ता पछि, यो पुष्टि हुन्छ कि सामसु'sको उच्च-अंत यस दिन प्रस्तुत गरिएको छ
मेईजु १ 16 लाई यथाशीघ्र सुरूवात गरिनेछ, कम्पनीका सीईओले उल्लेख गरे
Meizu सीईओ जैक वोंग कम्पनी को प्रशंसकहरु को लागी एक चीज लाई जीवन्त छ, भन्छन् कि Meizu १ soon चाँडो चाँडो आउनेछ।
शाओमी मी बैन्ड ले १3दिनमा एक मिलियन युनिटहरू बिक्री गर्दछ
सियाओमी एमआई ब्यान्ड एक मिलियन युनिटमा बिक्री भयो। चीनमा सियोमी ब्रेसलेटको नयाँ पुस्ताको सफलताको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
जुलाई २ 24 मा नयाँ शाओमी घटना: शाओमी मी ए २ आइपुगे
शाओमी मी ए २ आधिकारिक रूपमा जुलाई २ on मा प्रस्तुत गरिने छ। ब्रान्डको नयाँ फोनको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
LG G7 को पछिल्लो अद्यावधिकले हामीलाई f० fps मा भिडियोहरू recordk मा रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ
एलजीको फ्ल्यागशिप जी ले एक अपडेट प्राप्त गर्नेछ जुन यसले k० एफपीएसमा k केडीमा भिडियो रेकर्ड गर्न अनुमति दिनेछ
LG V40 मा जम्मा पाँच क्यामेरा हुन सक्छ
LG V40 ले कुल पाँच क्यामेरा फिचर गर्दछ। LG बाट नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन क्यामराको सर्तमा उत्तम बाजी दिन्छ।
Oukitel K8 का लागि परम्परागत डिजाइन मा दांव
अर्को टर्मिनल जुन Oukitel ले प्रस्तुत गर्दछ K8 हो, टर्मिनल पारंपरिक डिजाइन,-इन्च स्क्रीन र 6००० mAh ब्याट्रीको साथ
कम्पनीको आगामी बेजेल-कम फोनहरूको बावजुद मेजुको एमब्याक गइरहेको छैन
एकीकृत फिंगरप्रिन्ट पाठकहरूको साथ शारीरिक पहुँच कुञ्जीहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि छनौटको प्रमाणीकरण विधि थियो यस अघि कि मेजूले आफ्नो एमब्याक टेक्नोलोजीलाई बिदाई दिन चाहँदैन जुन ब्रान्डको आगामी फोनहरू बेजेल बिना नै आउने छ। मुख्य कार्यकारी अधिकृतले औंल्याए।
शाओमी मी अधिकतम of को फिल्टर गरिएका नयाँ विशेष विवरणहरू
शाओमीले शाओमी मी म्याक्स two को दुई संस्करणहरू सुरू गर्न सक्दछ। यसको नयाँ फोनको दुई सम्भावित संस्करणहरूको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
विभिन्न नोकिया मोडेलहरू फेस अनलक प्राप्त गर्नेछन्
नोकिया यसको धेरै फोनमा अनुहार अनलक गर्न ल्याउनेछ। यी फोनहरूमा चाँडै आउँदै यस अपडेटका बारे अधिक जान्नुहोस्।
सामसुले जुलाईमा एन्ड्रोइड ओरियोमा आफ्ना धेरै फोनहरू अपडेट गर्नेछ
सामसुले जुलाईमा एन्ड्रोइड ओरियोमा धेरै मोडेलहरू अपडेट गर्नेछन्। सामसु phones फोनमा आउने अद्यावधिकको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 ट्रिपल क्यामेराको साथ संस्करणको साथ आउनेछ
ग्यालक्सी S10 को ट्रिपल क्यामेराको साथ संस्करण हुनेछ। कोरियाली फर्मको नयाँ उच्च-अन्त र यसको ट्रिपल रियर क्यामेराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी रेडमी Pro प्रो अब आधिकारिक छ, यसका सबै सुविधाहरू जान्नुहोस्
हामी तपाईंलाई शाओमी रेडमी Pro प्रो, विश्व बजारमा मूल्य र उपलब्धताका सबै आधिकारिक विवरणहरू दिन्छौं
एन्ड्रोइड गोको साथ सामसु ofको पहिलो विशिष्टता फिल्टर गरियो
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J2 कोर: सामसु'sको पहिलो Android Go मोडल। यस तल्लो-अन्त मोडलको विशिष्टताको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्,
नोकिया .5.1.१ जुलाईमा युरोपमा थाल्नेछ
नोकिया .5.1.१ जुलाईमा युरोप आउनेछ। ब्रान्डको नयाँ फोनको सुरुवातको बारे थप जानकारी पाउनुहोस् जुन अब रूसमा आरक्षित गर्न सकिन्छ।
Xiaomi Mi Pad 4: चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ ट्याब्लेट
शाओमी मी प्याड:: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। आज प्रस्तुत गरिएको चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ ट्याब्लेटको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
वनप्लस's को ब्याट्री धेरै छिटो ढल्छ। यस असफलताको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन उच्च श्रेणीको लागि ऑक्सीजनओसको नयाँ अपडेट पछि आउँदछ,
सामसुले २०१ sales को लागि बिक्री बिक्रीमा पुग्ने छैन
सामसु'sको बिक्री अपेक्षा भन्दा कम हुनेछ। फर्मको बिक्रीको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन अपेक्षाहरूको अभावमा खस्कँदैछ।
ग्यालक्सी S9 र S9 + को लागि जून सुरक्षा प्याच अब उपलब्ध छ
ग्यालक्सी S9 र S9 + सुरक्षा अपडेट जून २०१ month को महीनाको लागि अब यूरोपमा डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ।
ग्यालक्सी एस for का लागि सामसु De डक्स प्याड अब स्पेनमा उपलब्ध छ
उपकरणले हामीले हाम्रो ग्यालक्सी S8, S9 र नोटaलाई कम्प्युटरमा रूपान्तरण गर्न सक्दछौं जसको साथ हामी किबोर्ड र स्क्रिनसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौं।
Xiaomi Mi 8 एक मिलियन इकाइ बेचेको छ
शाओमी मी ले दुई हप्तामा एक मिलियन युनिटहरू बिक्री गर्दछ। एशियाई बजारमा यी फोनहरूको सफलताको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
अल्काटेल १: एन्ड्रोइड गोको साथ नयाँ प्रविष्टि दायरा
अल्काटेल १: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ब्रान्डको नयाँ एन्ट्री-स्तर एन्ड्रोइड गो दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
नयाँ अफवाहहरू भन्छन् कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 आईरिस स्क्यानर छैन
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 को अफवाहहरु जारी, अब सबै कुरा संकेत गर्दछ कि आईरिस स्क्यानर अर्को मोड्युल को पक्ष मा हटाईनेछ
नीलो रंगको नोकिया X6 चीनमा सुरू हुन्छ
नोकिया X6 नयाँ ब्लू रंगमा चीन मा शुरू। फोनको नयाँ संस्करणको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन चीनमा शुरूमा शुरू भएको छ।
लेनोभो ट्याब4मा एन्ड्रोइड .8.1.१ ओरेओ बर्षको अन्त्य सम्म हुनेछैन
लेनोवो ट्याब नोभेम्बरमा एन्ड्रोइड .4.१ ओरेओमा अपडेट हुनेछ। यी ट्याब्लेटहरूमा आउँदै गरेको अपडेटको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट for का लागि जून सुरक्षा प्याच अब यूरोपमा उपलब्ध छ
एन्ड्रोइड द्वारा प्रबन्धित टर्मिनलों को सुरक्षा अपडेट एक वास्तविकता हो कि कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन, बावजुद ...
सामसुले पहिले नै एन्ड्रोइड गोको साथ आफ्नो पहिलो फोनको परीक्षण गर्दछ
Android Go को साथ पहिलो सामसु phone फोन परीक्षण चरणमा छ। यस फोनको साथ ब्रान्डले गरेको परीक्षणको बारे बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
नयाँ सोनी एक्सपेरियाका विशेषताहरू नेटमा फिल्टर गरिएका छन्। यो XZ3 प्रीमियम हुनेछ?
केही घण्टा अघि, नयाँ डेटा सोनी Xperia बाट १:: of को अनुपातको साथ लीक भयो। प्रकाशित स्क्रिनसटका अनुसार, रहस्यमय नयाँ सोनी एक्सपेरिया भर्खरै 'H18' मोडेलको अनलाईनमा लीक भएको छ। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं!
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J6: विशिष्टता र मूल्य
कोरियाली कम्पनी सामसुले आधिकारिक रूपमा ग्यालक्सी जे, लाई प्रस्तुत गर्‍यो, मध्य रेंज टर्मिनल जसले हामीलाई पैसाको लागि अत्यन्त चाखलाग्दो मूल्य प्रदान गर्दछ।
Vivo ले Vivo Y81 सुरुवात गर्‍यो, एक हेडिओ P22 SoC को साथ मिड-रेंज मोबाइल
Vivo ले उनीहरूको भर्खरको उपकरण जारी गर्यो। यो Vivo Y81, एक मध्यम दूरी को फोन हो कि एक विशाल स्क्रीन, एक Mediatek SoC, र Vivo Y81 पूरा गर्न आउँछ, फर्मबाट केहि फोन केही घण्टा अघि एक Mediatek Helio P22 प्रोसेसर र एक निशान डिजाइन संग शुरू। धेरै आकर्षक
पहिलो आधिकारिक छविहरू र शाओमी रेडमी Pro प्रोको मूल्य प्रकट भयो
शाओमी रेडमी Pro प्रो: फुटेको भिडियो, छवि र मूल्य। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन अर्को हप्ता प्रस्तुत हुनेछ
शाओमी मी पैड of को मूल्य प्रकट भयो
शाओमी मी प्याड:: दुई संस्करणका मूल्यहरू देखा पर्‍यो। चिनियाँ ब्रान्डको ट्याब्लेटमा पर्ने बजारमा हिट हुँदा यसको लागतको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
विको टमी:: एन्ड्रोइड गोको साथ प्रविष्टि दायरा
विको टमी:: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। एन्ड्रोइड गोको साथ ब्रान्डको नयाँ प्रविष्टि-स्तरको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
एलीफोन ए Review समीक्षा गर्नुहोस्, १०० यूरो भन्दा कमको टर्मिनल एकदम चाखलाग्दो छ
LG Stylo 4: फर्म को पहिलो एन्ड्रोइड एक एक स्न्यापड्रैगन 450 संग आउँछ
एलजीले एलजी स्टाइल4लाई आधिकारिक बनाएको छ, दक्षिण कोरियाली एन्ड्रोइड वनको साथ पहिलो फोन, अपरेटि system प्रणाली जुन एलजी स्टाइलो official आधिकारिक हुने बित्तिकै गुगलको प्रत्यक्ष समर्थन छ। यो उपकरण फर्म को पहिलो एन्ड्रोइड एक हो, र यो एक आठ कोर कोर स्नैपड्रैगन4संग आउँछ। यसलाई जान्नुहोस्!
Meizu X8: कम्पनीको अर्को मोबाइल एक SD710 को साथ सीईओ अनुसार आउँछ
चिनियाँ ब्रान्ड, उपस्थिति अनुसार, मेजु १ 16 र १ Pro प्रोमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ, अर्को दुई उच्च अन्त्य जसले मेजूको सीईओ ज्याक वोंगले कम्पनीको आधिकारिक फोरममार्फत घोषणा गरेको छ कि तिनीहरू मेइजुमा काम गरिरहेका छन्। X16, र यो एक SD8 संग आउनेछ।
Huawei पहिले नै यसको नयाँ Kirin 1020 प्रोसेसरमा काम गर्दैछ
किरीन १०२०: हुवावे प्रोसेसर उच्च-अन्तको लागि। यसको नयाँ उच्च-अन्तको लागि चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ प्रोसेसरको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
नोकिया X6 को अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण कम्पनीको वेबसाइटमा देखा पर्दछ
नोकिया X6 कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा देखा पर्दछ। यस आदेशको बारेमा अधिक फेला पार्नुहोस् जुन फोन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुरूवात गर्न जानिन्छ।
Huawei Mate 10 श्रृंखला अनुहार अनलक समावेश
Huawei Mate 10 श्रृंखला भर्खरै एउटा अपडेट प्राप्त भयो जुन हामी अनुहारको साथ टर्मिनल अनलक गर्न सक्दछौं
OPPO A73s: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
OPPO A73s: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात यस ब्राण्डको नयाँ फोनको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन यस गर्मीमा स्पेनमा आउने आशा गरिएको छ।
शाओमी मी प्याड4यो अर्को जून २ 25 मा प्रस्तुत गरिने छ
रेडमी Pro प्रोको प्रस्तुतीकरणको अतिरिक्त, चीनमा केवल days दिनमा चीनमा हुने छ, फर्मले आफ्नो नयाँ ट्याब्लेट पनि प्रस्तुत गर्ने छ, शियाओमीले यस अर्को जून २6मा आफ्नो नयाँ ट्याब्लेट प्रक्षेपण गर्ने छ। हामी एमआई प्याड about को बारेमा कुरा गर्छौं, एमआई प्याड to को उत्तराधिकारी
गुगल लेन्स अब वनप्लस [एपीके] को लागी उपलब्ध छ
यदि तपाईं Google लेन्सको साथ एकीकरणको साथ वनप्लस क्यामेराको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, यस लेखमा हामी तपाईंलाई यो कसरी गर्ने कसरी देखाउने देखाउँछौं।
एनर्जेइजर हार्डकेस H500S: फर्मबाट नयाँ मजबूत फोन 3000००० एमएएच ब्याट्रीको साथ
ब्याट्रीहरू, फ्ल्यासलाइटहरू र अन्य उपकरणहरूको प्रख्यात निर्माता एनर्जीरइजरले नयाँ फोकस गरिएको स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ, हालसालै ईन्नेरइजाइजरले एनर्जीजर हार्डकेस एच S०० एस प्रस्तुत गरेको छ, एकदम कम न्यूनतम डिजाइन र 500००० एमएएच ब्याट्रीको एक कम कम एन्ड मोबाइल।
शाओमी रेडमी Pro प्रो जुन २6लाई प्रस्तुत गरिनेछ
शाओमी रेडमी Pro प्रो आधिकारिक रूपमा जुन २6लाई प्रस्तुत गरिनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी अगस्टमा स्पेनमा लॉन्च हुनेछ
शाओमी मी अगस्टमा स्पेनमा आइपुग्नेछ। हाम्रो देशमा चिनियाँ ब्रान्डको उच्च अन्तको प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
OPPO खोज्नुहोस् X मूल्य र रिलिज मिति प्रकट भयो
हामीलाई पहिले नै अप्पिओ फाइन्ड एक्सको मूल्य र प्रक्षेपण मिति थाहा छ। ब्रान्डले अन्ततः यसको नयाँ उच्च-अन्तको मूल्य र यूरोपमा यसको प्रक्षेपण प्रकट गर्दछ।
सोनी Xperia XZ3 GFXBench मा लीक
सोनी पहिले नै सोनी Xperia XZ3 तैयार छ जस्तो देखिन्छ, यसको अर्को फ्लगशिप जुन धेरै सुविधाहरू र टेक्निकल विशिष्टताको साथ आउँदछ जुन सोनी Xperia XZ3 बिना GFXBench मा देखा पर्‍यो यसको धेरै मुख्य सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरू। हामी ती सबै विवरण दिन्छौं!
Huawei P9 Android Oreo मा अपडेट हुँदैन
Huawei P9 ले Android Oreo मा अपडेट प्राप्त गर्ने छैन। कम्पनी योजनाहरु मा यो परिवर्तन को बारे मा अधिक जान्नुहोस् कि यो निर्णय संग आश्चर्य।
OPPO Find X: चिनियाँ निर्माताको नयाँ प्रमुख
OPPO खोज्नुहोस् X: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त फोनको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ।
Xiaomi Mi Max3यस्तो देखिनेछ
केसहरूको निर्माताले शाओमी मी म्याक्स be, 3..6,99 इन्च ईन्च उपकरणको के हो भनेर आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुन लामो समय लिन सक्नुहुन्न।
सामसुले यसका फोनका लागि आफ्नै GPUs उत्पादन गर्दछ
सामसुले आफ्नो फोनका लागि GPUs उत्पादन गर्न गइरहेको छ। ट्याब्लेट र स्मार्टफोनका लागि कम्पनीको आफ्नै GPUs उत्पादन गर्ने निर्णयको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शियाओमीले यस हप्ता म्याड्रिडमा नयाँ स्टोर खोल्नेछ
शाओमीले यस शनिबार म्याड्रिडमा नयाँ स्टोर खोल्नेछ। हाम्रो देशमा नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड स्टोर खोल्ने बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
गुगल पिक्सेल X एक्सएलले एकल क्यामेराको प्रयोग गर्न जारी राख्छ तर खाच अपनाउछ
गुगलको स्टार टर्मिनल, पिक्सेल X एक्सएल पछाडि डबल क्यामेरा अपनाउने छ, राम्रो प्रदर्शन को कारण यो केवल एक संग हासिल गरीएको छ।
LG ले Android Q को साथ LG Q7 मा काम गर्दछ
LG ले LG Q7 को एक संस्करण एन्ड्रोइड वन संगै शुरू गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आउँदै गरेको कम्पनीको योजनाहरु बारे अधिक जान्नुहोस्।
नयाँ LG X5 (2018) का विशेषताहरू र प्राविधिक विवरणहरू। तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्!
धेरै घण्टा अघि, एलजीले चुपचापले एलजी एक्स ((२०१)) घोषणा गरेको छ, ब्रान्डको नयाँ उपकरण जुन भर्खरै एलजीको क्याटलगमा एकीकृत गरिएको छ केही घण्टा अघि ब्रान्डको नयाँ उपकरण एलजी एक्स ((२०१)) घोषणा गरेको छ। ब्रान्ड जुन दक्षिण कोरियाली क्याटलगमा भर्खरै एकीकृत गरिएको छ।
88455M MXNUMX टाइटेनियम TENAA मा यसको पूर्ववर्तीको समान डिजाइनको साथ देखा पर्दछ
8848 8848 एक चिनियाँ कम्पनी हो जसले अपरंपरागत डिजाइनका साथ धेरै महँगो र मूल लक्जरी फोनहरू सुरूवातको लागि परिचित छ।5XNUMX MXNUMX टिटानियम द्वारा जारी नवीनतम फोन TENAA द्वारा भर्खरै प्रमाणित गरिएको छ धेरै सुविधाहरू र विनिर्देशहरूको साथ यसलाई यसलाई यसको पूर्ववर्ती जस्तो बनाउँछ। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
OUKITEL K7-१159,99। .XNUMX for को प्रिअर्डरको लागि उपलब्ध छ
यसको सुरूवातमा dollars० डलरको छुटको साथ OUKITEL K7 पाउनुहोस्। Banggood मा फोन प्रक्षेपण प्रस्ताव को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
Xiaomi Mi A2 को मूल्य र रिलीज मिति फिल्टर गरियो
Xiaomi Mi A2: मूल्य र रिलीज मिति लीक भयो। नयाँ एन्ड्रोइड वन फोनको लागि अपेक्षित मूल्यहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट भण्डारको 9१२ जीबीको संस्करणमा आउँछ
ग्यालक्सी नोट को संस्करण 9१२ जीबीको भण्डारणको साथ हुनेछ। नयाँ संस्करणको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन उच्च-अन्तबाट आउँछ।
शाओमी रेडमी and र A एमा अवरक्त सेन्सर हुँदैन
शाओमी रेडमी and र A एमा अवरक्त सेन्सर हुँदैन। चिनियाँ ब्रान्डको दुई फोनमा हुने परिवर्तन बारे अधिक जानकारी लिनुहोस्।
यो सामसु fromको फोल्डिंग स्मार्टफोन थियो जुन कहिले उज्यालो देखिन
हामी तपाइँलाई म के हुन सक्छ भनेर छविहरू देखाउँदछौं, र अन्तमा यो थिएन, पहिलो फोल्डिंग स्मार्टफोन, यसलाई कुनै तरिकामा सैमसंग कल गर्न।
सामसु'sको गियर S3 होटल कर्मचारीहरूका लागि आदर्श संचार उपकरण हो
कोरियाली कम्पनीले आफ्नो Gear S3 स्मार्टवाचलाई होटलमा ग्राहकका अनुरोधहरू सुव्यवस्थित गर्न उत्कृष्ट उपकरणमा परिणत गरेको छ
सामसुले फेरि सन्देशहरूको ध्वनि अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ
एन्ड्रोइड Oreo को साथ टर्मिनल संग सबै प्रयोगकर्ताको लागि सामसुले उपलब्ध गराएको पछिल्लो अपडेट सन्देशहरूको टोनलाई अनुकूलन गर्ने क्षमता हो।
तीव्रले एन्ड्रोइड वनको साथ एक्वोस एसaको संस्करण सुरू गर्दछ
एन्ड्रोइड ओरेको साथ शार्प एक्वोस एस South दक्षिण कोरियामा सुरूवात गर्दछ। फोनमा एसियामा सुरूवात गर्ने यो नयाँ संस्करणको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
OPPO Find X डिजाइन एक नयाँ घोषणा मा प्रकट भयो
OPPO Find X को डिजाइन पहिले नै पूर्ण रूपमा चुहावट भयो। डिजाइनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तमा हुनेछ।
वनप्लस ले पत्ता लगाएको सुरक्षा त्रुटिमा सुधार गर्न अपडेट प्राप्त गर्दछ
वनप्लस लाई यसको सुरक्षा त्रुटि सुधार गर्न अद्यावधिक गरिएको छ। उच्च-अन्तमा टुक्र्याउँदै ऑक्सीजनस अपडेटको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
गुगलले एन्ड्रोइड उद्यममा सिफारिश गरीएको १ to फोन थप्दछ
एन्ड्रोइड उद्यम सिफारिश कार्यक्रम १ 17 नयाँ फोन जोडी। गुगल व्यवसाय प्रोग्रामको बृद्धिको बारेमा बढि खोज्नुहोस्।
सोनी Xperia घर को लागी एक प्रतिस्थापन को विकास गर्न
सोनी एक तह Xperia घर बदल्न को लागी काम गरीरहेको छ। नयाँ लेयरको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन जापानी ब्रान्डको फोनहरूमा आउँदछ।
Xiaomi Mi A1 ले Android .8.1.१ Oreo मा अपडेट गर्न सुरू गर्दछ
एन्ड्रोइड O.१ ओरियो शाओमी मी ए १ मा आइपुग्न थाल्छ। अपडेटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन अब प्रारम्भिक बीटा प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न थाल्छ।
ग्यालक्सी नोट ले स्क्रिनशट र फोटो लिन नयाँ भौतिक बटन थप्न सक्दछ
कोरियाबाट आएका भर्खरका अफवाहहरूले सुझाव दिन्छ कि ग्यालक्सी नोट9बजारमा क्याप्चर गर्न र फोटो खिच्न समर्पित बटनको साथ पुग्न सक्छ
OUKITEL ईन्जिनियरहरूले कडा मेहनत गर्छन्: OUKITEL K7 १०,००० mAh ब्याट्रीको साथ सुरू गर्नका लागि तयार छ
जुन १ On मा तपाईं OUKITEL K19 र यसको7mAh ब्याट्री पहिलो वैश्विक बिक्रीमा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यस कुपनको साथ $ 10.000 बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
वनप्लस २२ लाख दिनमा बेचिएको दस लाख एकाईमा पुग्छ
वनप्लस २२ दिनमा एक मिलियन युनिटहरू बिक्री गर्दछ। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च अंत एक सफलता हो र पहिले नै बेचेको एक लाख एकाईहरू भन्दा बढी छ।
शाओमी ब्ल्याक शार्क नयाँ निलो रंगमा शुरू भयो
शाओमीको ब्ल्याक शार्क चीनमा निलोमा सुरू गरिएको छ। नयाँ संस्करणको बारे बढि फेला पार्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको गेमि smartphone स्मार्टफोनको सुरूवात गरिएको छ।
फिल्टर Meizu १ and र १ the प्रो, ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त
Meizu १ and र १ Pro प्रो: विशिष्टता, डिजाइन र मूल्यहरु चुहायो। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त्यको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन अगस्टमा आउनेछ।
अल्काटेल and र L एल आधिकारिक रूपमा स्पेन आइपुग्छन्
अल्काटेल and र L एल: स्पेनमा मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ब्राण्डका दुई फोनहरू बारे अधिक खोज्नुहोस् जुन स्पेनमा पहिले नै आधिकारिक रूपमा सुरू गरिएको थियो।
सामसु G गियर एस सँग यसको पूर्ववर्ती भन्दा ठूलो ब्याट्री हुनेछ
सबै कुरा स indicate्केत गर्दछ कि सामसु G गियर S4 बजार अधिक स्वायत्तता संग हिट गर्दछ, S4 3n 90 mAh को वृद्धि गरेर।
सामसुले ग्याल एस नोट announce सँगसँगै गियर एस announce घोषणा गर्न सक्दछ
अर्को गियर एस smart स्मार्टवाच ग्यालक्सी नोट with को साथ अगस्ट4तारिख अनप्याक गरिएको समयमा आउन सक्छ, हामी तपाईंलाई थप विवरणहरू बताउनेछौं
Huawei Mate 10 यसको अर्को अपडेटको साथ सुपर ढिलो गतिमा रेकर्ड गर्न सक्षम हुनेछ
Huawei Mate 10 सुपर ढिलो गतिको साथ अपडेट हुनेछ। नयाँ सुविधाहरूले यसको नयाँ अपडेटमा उच्च-अन्तमा कुन हिट गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
Asus Zenfone 5Z आधिकारिक रूपमा यूरोप आइपुग्छ
Asus Zenfone 5Z 499 यूरोको मूल्यको साथ युरोपमा आइपुग्छ। MWC २०१ its मा यसको प्रस्तुतीकरण पछि Asus फोनको प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei Huawei P20 को छ मिलियन युनिट बेचेको छ
Huawei P20s तीन महिना मा छ लाख इकाइहरु बेचेको छ। Huawei को दुनिया भर मा नयाँ उच्च अंत बिक्री को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
नोकिया X6 को नयाँ अपडेट तपाईंलाई खाच लुकाउन अनुमति दिन्छ
नोकिया X6 तपाईंलाई आफ्नो नयाँ अपडेटको साथ निशान लुकाउन अनुमति दिन्छ। यो फोनमा पुग्ने तरिकाको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंलाई धन्यवाद लुकाउन सकिन्छ।
ग्यालक्सी नोट of को ब्याट्री ,9००० एमएएचको हुनेछ
भर्खरको चुहावट अनुसार ग्यालेक्सी नोट ले बजारमा ,9००० एमएएच ब्याट्री लगाउने छ, जुन कोरियाली कम्पनीमा प्रयोगकर्ताहरूको माग हो।
Xperia XZ3 को पछिल्लो चुहावट अनुसार डुअल क्यामेरा हुनेछ।
जापानी कम्पनी सोनीको अर्को फ्लगशिप, डुअल रियर क्यामेरा प्रणालीको साथ मार्केटमा हिट हुनेछ
ग्यालक्सी नोट मार्केटमा9रंगमा हिट हुनेछ
भर्खरका अफवाहहरूका अनुसार ग्यालेक्सी नोट ले बजारलाई अचम्मै नयाँ र newको साथ मार्न सक्छ: खैरो, र color्ग जुन देशहरूको निश्चित समूहको लागि गन्तव्य हुने थियो।
वनप्लस Sil सिल्क व्हाइट फेरि स्टकमा छ
वनप्लस Sil रेशम सेतो फेरि अनलाइन उपलब्ध छ। फोनको विशेष संस्करणको बारेमा फेला पार्नुहोस् जुन फेरि रिलीज हुँदैछ।
लेनोभो Z5 चीन मा बिक्री मा आफ्नो पहिलो दिन मा बेचे। यसको सुरूवातमा चिनियाँ ब्रान्डको फोनको सफलताको बारे अधिक जान्नुहोस्।